Guddiga Khayraadka Dabiiciga ee Wakiillada oo Kormeeray Mashruuca Biyo-ballaadhinta Hargeysa + sawirro – Hargeisa Water Agency
Guddiga Khayraadka Dabiiciga ee Wakiillada oo Kormeeray Mashruuca Biyo-ballaadhinta Hargeysa + sawirro
May 8, 2016By admin
Hargeysa (HWA) Guddiga Khayraadka Dabiiciga ah ee Golaha Wakiillada oo uu wehelinayo Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa iyo mas’uuliyiin kale, ayaa kormeer ku soo maray hawsha mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Somaliland maanta.
Kormeerka Guddiga Wakiillada oo la xidhiidhay u-kuurgalidda halka ay marayaan saddex weji oo loo qaybiyey hawsha biyo-ballaadhinta Hargeysa, iyagoo warbixin ku saabsan mashruuca ka dhegaystay Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Mr. Ibraahim Siyaad Yoonis oo faahfaahin ka bixiyey shaqada socota iyo inta ilaa hadda u hirgashay.
“Waxa noo sharaf ah wakaalad ahaan, in aannu soo dhoweyno xildhibaannada Golaha Wakiillada ee Guddiga Khayraadka Dabiiciga ah ee kormeerka ku soo maray mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Hargeysa oo ay lacagtiisa bixiyeen Midowga Yurub iyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) oo ay fulinayso Hay’adda UN-HABITAT. Waxaynu soo marnay halka ay ka socoto dhigista beebka cusub ee biyaha oo maraya xabaalihii hore ee xaafadda Sheedaha ee woqooyiga caasimadda.
Waxa kale oo aannu soo marnay kaamkii uu agabku yaal, ceelasha Horo-haadley oo ah saddex ceel iyo barkadda weyn ee Geed-deeble oo ah ta ay isugu tagayaan biyaha ceelashan ka tagaa. Markaa waxaannu jecelnahay inay nala arkaan xildhibaannada Golaha Wakiilladu hawsha weyn ee ka socota oo ah mid aad u ballaadhan oo aannu Illaahay (SWT) ka rajeynayno inuu nagu guuleeyo oo ah mashruuca ugu ballaadhan ee ka socda Somaliland dhaqaale iyo farsamo ahaanba xilligan, xildhibaannadana waxaannu ka codsanaynaa inay hawshaas gacan ka geystaan idinka oo shaqadiinii gudanaya,” ayuu yidhi Maareeye Siyaad.
Guddoomiyaha Guddiga Khayraadka Dabiiciga ee Golaha Wakiillada Md. Siciid Warsame oo halkaa ka hadlay, ayaa tilmaamay in kormeerkoodu salku ku hayo sidii ay indhahooda ugu soo arki lahaayeen hawsha mashruuca biyo-ballaadhinta caasimadda Hargeysa.
“Hawsha halkan ka socota Maareeyaha Wakaaladda Biyaha iyo shaqaalihiisaba waannu mahadnaqaynaa oo hawshani waa mid najaxday oo waqti dhowna soo gaadhi doonta magaalada Hargeysa oo u baahan qorshe sidii loo qaybin lahaa biyaha, balse waxa muhiim ah in dadku helaan biyaha ugu jaban, Xeerka Biyuhuna waxa uu dhigayaa in aanay biyuhu ahayn iib, laakiin ay yihiin adeeg,” ayuu yidhi Xildhibaan Siciid Warsame, waxaannu intaa ku daray isagoo hadalkiisa sii wata, , “Imminka dhulkaa uu maray beebku waa meel dan guud ah oo waxaannu ka soo saari doonaa xeer sheegaya in aanay cidna dhisan karin. Kollay haddii aannu soo aragnay waxyaabaha baahida muuqda ayey noqonaysaa oo waa khasab in laga hawlgalaa, waxna laga soo saaraa oo ummaddii dhammayd ee Hargeysa ku noolayd, haddii la yidhaa nin baa kor degay waa khalad oo kii hore ayaa naloo sheegay in la kor dagay oo meel la mariyo ayaa la la’yahay, waa dhibaato, dastuurkeenuna waxa uu sheegayaa in dawladdu leedahay, qofkuna isticmaalkiisa leeyahay.”
Waxa kaloo uu sheegay in xaaladda biyo yaraanta Hargeysa tahay mid ku timi koradhka magaalada iyo dadkeeda oo aanay cidina ku eedaysnayn, waxaannu yidhi, “Waxaad arkaysaa in maalinba maalinta ka dambaysa ay Hargeysa sii badanaysay, biyo-soo-saarkuna 9,000m3 maalintii ayuu taagnaa, dadkuna intaas way sii badanayeen oo marka la eego biyaha aynu cabbi jirnay iyo dadka ku nool Hargeysa, caalamka ama cid kasta oo loo bandhigaa waxay is-weydiin jireen sidee ayey u nool yihiin? Waxaynu isaga nooleyn qaabkii Soomaalida oo booyado ayeynu ku nooleyn.”
Sidoo kale, Xildhibaan Md. Cali Obsiiye Diiriye (Cali-gabiley) oo ka tirsan Guddiga Khayraadka Dabiiciga ah ee Golaha Wakiillada, ayaa isna u mahadceliyey dadka leh beeraha laga dhex qoday ceelasha iyo kuwa ay dhexmareen beebebka ee uga tanaasulay sidii shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa u heli lahaayeen biyo ku filan.
Md. Cali- Gabiley waxa uu tilmaamay inay arkeen wax ka duwan wixii ay hore u aaminsanaayeen, waxaannu yidhi, “Runtii annaga oo sheeko iyo dhalantaad u haysanay hawsha socota in Maareeyuhu na taabsiiyey oo uu yidhi bal kaalaya indhihiina ku soo arka, markaa waxaad taabato ayuun baad wax ka sheegi kartaa, maantana waxa halkan nooga muuqatay inay hawlwanaagsani ka socoto, balse ilaa biyo la cabbo la garowsanayn, laakiin waxannu ognahay in Hargeysa ay soo galeen biyihii, haddii loo sabro.”
Ugu dembeyn, Xildhibaan Md. Cali Obsiiye Diiriye (Cali-gabiley), waxa uu kula dardaarmay shacabka reer Somaliland in aanay horistaagin wixii danta guud ah, isagoo si gaar ah ula hadlay dadka degan meelaha beebka laga qodayo, “Waxaannu leennahay shicibka Somalilandnow dhulkani waa innnagu wada amaanno, Illaahay baanna innagu wada amaanaysiyey, waa midda kalena masuuliyiinta ayuu u dhiibay dhulka oo adigu waxaad ku leedahay kolba intii laguu gooyo, xataa beeraha la sheegayo ku dhaqankooda kama badna 50 sanno oo ninku ma leh ee iska illaaliya biyaha halkan la marin maayo oo dadkii waa lagu dhibayaa innaga oo biyo u baahan oo aynu aynu u baranno waddaninimada,” ayuu hadalkiisa ku soo ururiyey Md. Cali Obsiiye Diiriye (Cali-Gabiley).